Wardsgwọ Ọrụ Na-eguzosi Ike n'Ihe | Martech Zone
Mgbe m rụrụ ọrụ na akwụkwọ akụkọ, ọ na-adịkarị m ka anyị na-eme ihe azụ. Anyị na-enye ọtụtụ ndị ọhụrụ izu nke akwụkwọ akụkọ ọ bụla ọhụrụ debanyere aha. Anyị nwere ndị debanyere aha bụ ndị kwụrụ ụgwọ zuru price maka iri abụọ gbakwunyere afọ na mgbe natara a ego ma ọ bụ ọbụna a na-ekele gị ozi… ma anyị ga-enye onye na-enweghị iguzosi ike n'ihe ka anyị ika na ozugbo ụgwọ ọrụ. Ọ baghị uru.
Kedu uru ọ na-aghọrọ maka ịkwalite iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa ya? Kedu ihe ọ ga-ewe iji kpalie iguzosi ike n'ihe ahụ? Regwọ ọrụ na-enyere aka, mana ọ dị mkpa ilekwasị anya n'ihe dịka ịnye nnukwu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, yana ịbụ onye amara maka inwe ọrụ ndị ahịa kachasị elu. Ozi Zendesk kachasị ọhụrụ, Nkwụghachi Ụgwọ, na-egosi iguzosi ike n’ihe ndị ahịa dị ezigbo mkpa. 78% nke ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe na-enyere aka ịgbasa ozi banyere ika gị, na 54% agaghịdị eche na ịgbanwere onye asọmpi.
Tags: ezi ndị ahịaụgwọ ọrụ ndị ahịaiguzosi ike n'iheiguzosi ike n'ihe mmemmeụgwọ ọrụ mmemmeụgwọ ọrụ